छिमेकि मुलुक बिरुद्द जासुसी गर्नेलाई सि एन एन हिरो बनाउने ? (भिडियो) :: NepalPlus
हात्तीका देखाउने दाँत (दाह्रा) र चपाउने दाँत भिन्नै हुन्छन् भनिन्छ । बाहिर देखिने ठूलो हुन्छ । तर त्यसले चपाउन्न । भित्रको सानो हुन्छ त्यसैले चपाउने हो । हामीले राष्ट्रिय ब्यक्तित्व भनेर मानेका । सिएनएन हिरोमा नामपनि समेटेका । आँखाको ज्योति गुमाएका हज्जारौंलाई उपाचार गरेर संसार देखाएका । बिदेशीले, छिमेकिलेपनि पत्याएर आफ्ना मुलुकमा बोलाएका । सम्मान दिएका । विश्वास गरेका चिकित्सकले त्यहि विश्वासमा लात हान्दै गुप्तचरी गराउन सहयोग गरेको प्रमाण फेला परेको छ । डा सन्दुक रुइत हुन उनी ।
ताईवान निवासी मेरा एक जना मित्रको मेल पाएपछि त मैले पत्याउनै सकिन । डा सन्दुक रुइतले गुप्तचरी गरेको ? अँहँ हुन सक्दैन । तर भिडियो रिपोर्ट छ । छर्लंगै हेर्न पाइन्छ अनि नपत्याएर के गर्नु ?
उनी नेपालमा हाइ हाइका पात्र त हुन् नै । दया, माया, उपकारी र एक समाजसेवीका रुपमापनि उपल्लो दर्जामा छन् । जनजनको मनमा बसेका । उनले उपचार गरेर द्रिष्टि दिएका हजारौंको आशिर्वाद पाएका । विश्वलाई चकित पार्ने चिकित्सकिय अक्किल आफैंले निकालेर विश्वमै नाम कमाएका । आफूसँगै देशको ईज्जत र प्रतिष्ठा राखेका । तर यस्तो मान्छेले किन र केकालागि त्यो विश्वासमा लात हान्दै गुप्तचरी गरेको होला ? गुप्तचरीनै गरेकाकि अमेरिकाको प्रिय बन्न खोजेका ?
उत्तर कोरीयाली सरकारले डा सन्दुक रुइतलाई ससम्मान आफ्नो देश लगेछ । हजारौं कोरियाली द्रिष्टिबिहिनको शल्यक्रिया गर्न । आँखाका अन्य समस्याको उपचार गर्न । त्यहाँको सरकारले विश्वास गर्‍यो रुइतलाई । मागेको, लागेको पारिश्रमिक दियो । आरामले राख्यो । आफ्नो आत्मा दियो । विश्वास गर्‍यो । नेपाली भनेर सम्मान दियो । तर रुइतले त्यसको दुरुपयोग गरे । कोरियालीको विश्वासमा लात्ताले हानेर अमेरिकिकालागि गुप्तचरी गर्न सहयोग गरेछन् । उनलाई दिईएको चिकित्सकिय सुविधा र सुरक्षा पहुँचको दुरुपयोग गर्दै उनले अमेरिकि पत्रकार लगेछन् उत्तर कोरिया । तिनका कयामरा लुकाएछन् । यसरि लुकाउ भन्दै सिकाएछन् । उनैको सुरक्षा, पहुँच र सुबिधामा गुप्तचरका नाईके अमेरिकीले क्यामरा लिएर गए । अनि उत्तर कोरियाको गुप्तचरी गरे । समाजसेवी सन्दुक रुइतले अमेरिकी दादागिरी, गुप्तचर र आतंककारीका नाइके अमेरिकिहरुलाई उत्तर कोरिया बिरुद्द गुप्तचरी गर्न सहयोग गरे । यस्तो बदमासी गरेको चाल पाएपछि उत्तर कोरियाले डा रुइतलाई बोलाउन छाडेछ । पहिले हरेक वर्ष बोलाउने रहेछ उत्तर कोरियाले ।
एउटा चिकित्सक । उनलाई राजनितिको के मतलव । त्योपनि अमेरिकाको पक्षमा । हाम्रो लागि सबै छिमेकि समान् हुन् । उनले राजनिति गर्ने होइन । त्योपनि अपराध के राजनिति हुनु ? अर्काको मुलुक बिरुद्द गुप्तचरी र जासुसी गर्न सहयोग गरेर उनी आफू त बदनाम भए नै देशकोपनि बदनाम गरे “नेपाली जुनैसुकै पेशाका होउन् विश्वास भरोसा गर्नुहुन्न” भनेर । नेशनल ज्योग्राफीले पाँच वटा भिडियो राखेको रहेछ सार्वजनिकरुपमै । अझ कति गोप्य खिचेको होला ? मिल्ने सम्मको सार्वजनिक गरेको न हो । सबै त तिनले खोल्दैनन् नै । दर्शकहरुको भिड बढेपछि सायद कतैबाट बिरोध आयो होला । वा झिकिदिन आग्रह गरिएकाले हुन सक्छ। हिजो बिहानबाट दुई वटा भिडियो चाहिँ नखुल्ने बनाइएको छ । म्यागासासे जस्तो प्रतिस्ठित पुरस्कार पाइसकेका यस्ता ब्यक्तिले किन त्यस्तो काम गरेका होलान् अचम्म लागिरहेको छ । ति मध्ये एउटा भिडियो हेर्नुस् है त ?